China Square uye Rectangle Tin bhokisi reChipo Packaging fekitori uye vagadziri | Byland
[Chimiro]: Square, rectangular, round uye irregular, nezvimwewo.
[Kushandisa]: chikafu, chipo, makemikari. etc.
[Chinyorwa]: A-kirasi tinplate, chikafu-giredhi kana SGS yakatenderwa.
[Ukobvu]: 0,21 ~ 0.35mm zvinoenderana kukura kana mutengi racho.
[Kushandisa]: chikafu, chipo, makemikari. nezvimwewo
[Saizi]: Kureba uye upamhi hwakagadziriswa uye iko kukwirira kunogona kugadziridzwa sekuda kwako.
Yakagadziriswa saizi inowanikwa kana iripo muforoma isina kukodzera zvigadzirwa zvako.
[Ruvara]: Chero dhizaini uye logo zvinogona kudhindwa pamusoro pebhokisi reti, CMYK kana PMS sekuda kwako
[Kuputira]: Inodzivirira kupfeka, uye shinny kana matti kupedzisa nenzira
[Kurongedza]: Katoni yePallet sekuchengetedzwa kuri nani kwetini.
[MOQ]: 5000 ~ 25000pcs sehukuru hwayo.
[Tsika Yemuenzaniso Yakatungamira Nguva]: 7 ~ 10days yemaumbwe aripo
Mazuva gumi nemashanu kusvika makumi maviri neshanu yeforoma nyowani mushure mekusimbiswa kwekudhirowa furu uye kutambira fizi fizi
[Kugadzira Inotungamira Nguva]: 25 ~ 30days mushure mekunge sampuro yasimbiswa kana kutsamira pahuwandu.
[Nguva Yekutumira]: EXW, FOB kana CIF
[Nguva Yekubhadhara]: T / T 30% sekubhadharira mari, mari yemari inobhadharwa isati yatumirwa.
[Chitupa]: Coca Cola, SEDEX mbiru Disney, SA8000, ISO9001, ISO14001, BRC, NBCUniversal, nezvimwe,
[Nei Uchisarudza Tin Packaging]: Kupakata Kunotengesa Chigadzirwa
Vatengi vedu vanosarudza tangi kurongedza kwezvakasiyana zvikonzero. Pazasi pane iyo yatinonzwa nezvayo kazhinji.
1. Chipo pasipo isina yechipiri kurongedza inodiwa
2.Kutengesa, kubatanidza, kukosha kwakakwirira kunoonekwa
3. Kudzivirira kurongedza
4. Shelf kugadzikana
5. 100% inogadziriswazve uye yakagadzirwa nesimbi yakadzokororwa
6. Kubata maziso mumunda wakawandisa wevanokwikwidza
[ZVAKANAKA]: Zvikonzero zvina zvekuti usarudze Nenyika Unogona semutengesi wako:
-Makore anopfuura gumi neshanu 'ruzivo mumunda wekugona kudhinda nekugadzira
-5 otomatiki yekugadzira mitsara yehunhu hwemhando uye kuendesa munguva.
-Professional graphic dhizaini, kuburitsa firimu, 3D mufananidzo uye sevhisi yekurongedza zano
-Environmental zvinhu uye dzakasiyana-siyana kudhinda tekinoroji
[Exhibition uye International Show]: Nenyika Inogona kuenda kuCanton Fair uye kumwe kurongedza kwepasirese kuratidzwa kuGuangzhou neShanghai gore rega.
1.Iwe uri fekitori kana kambani yekutengesa?
A: Isu takamisa muna 2005, nyanzvi mukugadzira mhando dzese dzemhando yepamusoro mabhokisi etini nemakani, anoshandiswa pakudya, chipo, zvipodaidzo, toyi, nezvimwewo Uye isu tine mashopu maviri emazuva ano ane mazana mazana matatu emamirimita.
2. Une stock, ndinogona kutora mharidzo? Sei kutora mharidzo?
A: Hongu, zvizhinji zvezvinhu zvedu zvirimo, kana iwe uchida kutora sampuro, ingotiudza chinhu, saizi, ruvara uye huwandu, kuti tikwanise kutarisa mutengo wekutumira iwe.
3. Chii chinonzi MOQ?
A: Tinopa yakaderera MOQ kubatsira vatengi kuvhura musika, tinoshuvira kutanga kwenguva refu bhizinesi hukama nevatengi vedu.
4. Ndeipi yako yekugadzira inotungamira nguva?
A: Isu tinobata vashandi vanopfuura mazana matanhatu, makumi matatu ekubaya mitsara nekubuda kwemwedzi pamamiriyoni matanhatu emabhini, nemitsetse yekugadzira otomatiki yakatangwa muna2012, tinogona kusangana nenguva pfupi yekuendesa mukati memazuva 20-30.
5. Unogona kuita dhizaini kwatiri? Tingaenderere mberi sei kana isu tichifanira kutsika chiratidzo chedu pazvinhu zvako zviripo?
A: Dhizaini dzakagadziriswa dzinogamuchirwa, saizi, zvimiro, kudhinda uye zvivakwa zvakagadziriswa, tinogona kupa rubatsiro kugadzira michina yekudhirowa uye 3D dhizaini zvinoenderana nepfungwa yevatengi usati waita mafuru matsva.
Pashure: Mhete inodhonzwa mhete yekurongedza zvinovaka muviri uye fomula_mukaka upfu
Zvadaro: Tinplate inogona nealuminium EOE yakavharirwa kurongedza doro nyowani
4Liters (1gallon) gaba anogona kavha injini O ...
Tsika 20Liters Paint Tin pail - Leak-proof ti ...
Metal Tin Cans-Container kuti kavha Car Wax ...